CR7, Isco & Ramos Oo Tababarka Yimid Ka Hor Kulanka Juve %
Kadib guushii 3-0-ka ahayd oo ay kasoo gaareen Las Palmas ayaa waxaa ciyaartoyda Real Madrid ay dib ugu soo noqdeen tababarka iyagoona isku diyaarinaya ciyaarta weyn ee aadka loo sugayo taasoo ay wajahaan Juvemtus.
Isco, Ramos, Ronaldo iyo magacyo kale oo waa weyn ayaa Madrid tababarka la qaatay, waxaana ay ciyaartoydaan ay seegaan kulankii ay soo garaaceen Palmas, kaasoo ay goolasha au ka kala heleen wiilasha kala ah Bale iyo Benzema.
Xidigahaan ayaa waxaa Zidane uu xaqiijiyay inay ku maqnaayeen sababo ku aadan inuu siinayay Nasiino maadaama ay kasoo laabteen waajibaadka qarankooda, waxaana ay hada isku diyaarinayaa kulanka ay la dheelayaan Juve.
Ramos iyo Isco oo ay wehlinayaa ciyaartoyda kale ayaa waxay u qaateen tababarka si caadi ah, iyagoona umuuqda kuwa wajihi kara Juventus kaasoo uu ku xiran yahay mustaqbalkooda ama bandhigooda fasal ciyaareedkan.
Kulanka Los Blancos iyo Juve ayaa wuxuu ka tirsan yahay wareega Sideed dhamaadka ee Champions League, waxanaa lugta hore oo Habeenka Talaada dhici doona lagu dheeli doono garoonka Turin ku yaala ee Juventus Stadium.
Shabakada wararka cayaaraha ee Laacib.so ayaa waxay kusoo gudbin doontaa hadii uu ALLE raali ka noqdo wax walba oo ciyaartaan ku saabsan iyo waliba Natiijada dheeshaan, islamarkiiba uu soo dhamaado kulanka.
Champions LeagueJuventus vs Real Madrid